Valarie Amos oo baaq jeedisay - BBC News Somali
Valarie Amos oo baaq jeedisay
12 Disembar 2011
Valerie Amos, waxay walaac ka muujisay saameynta ay yeelan karaan howgaladda military ee ka socda Soomaliya, waqti xaaladda biniaadanimo ee ka taagan Soomaliya ay tahay mid aan ka soo kaban abaartii ugu darneyd ee ku dhufatay geeska africa muddo 60 sanno ah.
Valerie Amos waxay waraysi ay siisay wariyaha BBCda Maxamuud Cali, ugu baaqday dhinacyadda ku howlan colaada in ay ilaaliyaan xuquuqda dadka shacabka ah, wax walbana ka hor mariyaan nolosha dadka ku barakacay abaarta iyo colaada ka taagan Soomaliya.
Kaaliyaha xoghayaha Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha gargaarka waxay xooga saartay baaq ay u jeedinaysay waddamada wada howgaladda military in ay hubaal ka dhigaan in howgaladooda aanay noqon kuwo waxyeelo u geysta dadka barakacay.
Baaqa Valerie Amos waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo hayadda ICRC ay sheegayso in duqeyn hawada ah oo ka dhacay magaalada Baardheere ay saameysay xarun dadka barakacay gudaha Soomaaliya,Waxayna intaasi raacisay in xaruntaas aanay cidna ku sugneyn waqtigaas iyada ah balse uu burbur soo gaaray qalabkii xarunta.
Dhinaca kale Ms Amos ayaa ka digtay in xaaladda bani'aadanimo ee ka taagan Soomaliya la dhumin doono horumarkii la gaaray, haddii bay tiri aanan la dardar gelinin howlaha gargaarka ee socday, waxayna sheegtay in ay ka walaacsantahay amarka dhowaan ka soo baxay kooxda AlShabaab ee meelaha ay gacanta ku hayaan ay sheegeen in ay ka mamnuuceen 16 hay'adood oo kuwa samafalka ah oo ay ka mid yihiin qaar ka tirsan Qaramada Midoobay.